कोशीपीडित बाह्र वर्षसम्म पनि टहरामै : कसले दिने क्षतिपूर्ति ? – Nepal Japan
कोशीपीडित बाह्र वर्षसम्म पनि टहरामै : कसले दिने क्षतिपूर्ति ?
नेपाल जापान २९ भाद्र १६:३४
क्षतिपर्तिको माग गर्दै धर्नामा बसेका कोशी पीडित (फाइल फोटो)
विसं २०६५ अघि पक्की घर भएका कोशी गाउँपालिका–३ स्थित नहरचोकका नुर अन्सारी अहिले फुसको छानाको घरमा बस्नुहुन्छ । बाढीका कारण घरघडेरी र जग्गाजमिन गुमाएपछि उहाँ नहरचोकमा फुसको छाना लगाएर बस्दै आउनुभएको छ ।
सप्तकोशीको बाँध फुटेको १२ वर्ष बित्दा सरकारले दिएको ५० हजार रुपैयाँबाहेक राहतका नाममा अरू केही नपाएको उहाँको गुनासो छ । सरकामा आफ्ना मान्छे र पहुँच हुनेहरुले राहत पाए तर पहुँच नपुग्ने वर्ग अझै पनि राहत पाइन्छ कि भन्ने आशामै छन्, अस्थायी टहरामा रात बिताइरहेका छन् । प्रभावितमध्ये अधिकांश एक वर्ष शिविरमा बसेर घर फर्किएका थिए ।
यो समयमा श्रीपुर, जग्दी कुसाहालगायतका स्थानमा २०६५ सालको बाढीअघि धानका बाला लहलह हुन्थ्यो । यसबेला कोशीपीडितको जग्गामा बालुवा छ । कोशी गाउँपालिका–३ पश्चिम कुसाहाका हकिम अन्सारीको खेतमा यतिबेला धान हुन्थ्यो । एक बिगाहा जमिनमा उब्जाएको धानले उहाँको परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्थ्यो । उहाँलाई यति बेला खान लाउनको समस्या छ ।
विसं २०६५ भदौ २ गते सप्तकोशी नदिले सुनसरीको पश्चिम कुसाहाको पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउँ पुग्दा सात हजार ५७२ घरपरिवारका ४२ हजार ८०० नागरिक विस्थापित भएका थिए । नुर अन्सारी पनि तीमध्येका एक पीडित हुन् । सुनसरीको खेतीयोग्य पाँच हजार ५०० हेक्टर जमिन बालुवामा परिणत भएको थियो ।
केही कोशी प्रभावितको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको मण्डल बताउनुहुन्छ । बाढी आएर बस्ती सखाप पारेको १२ वर्ष बित्दासमेत पीडितका लागि भनेर आएको रकम पाएका छैनन् । मण्डलका अनुसार २०६५ चैत १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३६ सय बिगाह जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने, घर निर्माण गर्न प्रत्येकलाई ३० क्युफिट साँखुको काठ, ५७८ घरपरिवारलाई घर मर्मत गर्न २० हजारको दरले रकम र एक हजार ४२२ जना सुकुम्बासीलाई दुई कठ्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि एक अर्ब ६६ करोड रकम निकासा गरेको थियो । तर आफैँ मुआब्जा नपाएको मण्डलले बताउनुभयो । करिब एक हजार ९०० पीडितलाई काठ वितरण गरेर बाँकीलाई नदिएको पीडितले बताएका छन् । पीडितप्रति परिवार ३० क्युफिट साँखुको काठ दिने भनेर मन्त्री परिषद्बाटै निर्णय भएको मण्डलको भनाइ छ । “पीडितलाई राहतका लागि हामी स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका धेरै निकाय धायौँ तर राहत पाइएन”, अध्यक्ष मण्डलले भन्नुभयो, “हामी आफ्नो सम्पत्ति भएर पनि सुकुम्बासी भयौँ तर राज्य जनता सुकुम्वासी भएको हेरेर बस्यो ।”
कोशीपीडित आज १२ वर्षसम्म पनि राज्यविहीनताको अनुभव गरेर टहरोमा दिन गुजार्दै छन् । प्रदेश नं १ का वनमन्त्री जगदिश कुसियतलाई पीडितले कोशी कटान क्षेत्रमै ल्याएर कार्यक्रम गर्दा पनि उहाँले काठ नदिलाएको गुनासो गरे । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट विजयी कुसियत हाल मन्त्री हुनुहुन्छ ।
यता सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्रमणि पोखरेल प्रक्रिया पूरा गरेकाले राहत पाएको र नपु¥याउनेले नपाएको हुनसक्ने बताउनुहुन्छ । दैैविप्रकोप राहत कोषमा उहाँहरुलाई उपलब्ध गराउन पर्याप्त रकम नरहेको उहाँले बताउनुभयो । सप्तकोशी नदीले गरेको महाविनाशले त्यसबेलाको सुनसरीको साविक पश्चिम कुशाह गाविसस्थित तटबन्ध भत्काएर हरिपुर, श्रीपुर र पश्चिम कुशाह पूर्णरुपमा क्षति पुर्याएको थियोे । लौकही, मधुवन, वसन्तपुर र घुस्कीकाकेशी स्थानमा आंशिक क्षति पुर्याएको थियो ।